दिपा दिदी तपाईं छोरी भएर जन्मिनु नै गल्ती भयो- नायिका केकि अधिकारी – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /Intresting/दिपा दिदी तपाईं छोरी भएर जन्मिनु नै गल्ती भयो- नायिका केकि अधिकारी
बिगत केही हप्ता यता आमा त्यसै त्यसै त्रसित हुनुहुन्छ। फेसबुकमा खासै सक्रिय हुनुहुन्न आमा तर आजकल हर दिन हर घन्टा आमाको आँखा अनि ध्यान फेसबुक मै हुन्छ। नसा लाग्यो कि क्या हो आमा भनेर सोधेको, होइन तिमीले केही लेखेको छौ कि भनेर हेरिराको भन्नुभो। अहिले चर्किरहेका विषयमा केही भन्ने वा लेख्ने नगर है भन्नुभो। सहनै गाह्रो हुने प्रतिक्रियाहरु आउछन् अनि मेरो मन भतभत पोल्छ भन्नुभो।
म एकछिन घोत्लिए अनि सोचेँ, गल्ती त हाम्रै हो नि दीपा दी,पहिलो गल्ती त तपाईं छोरी भएर जन्मिनु भो। ल त्यस्मा हाम्रो केही चल्दैन, अनि फेरि तपाईं सफल चाहिँ किन हुनुभो? ल त्यो पनि पचाउने प्रयास गरुला , अनि फेरि तपाईंले भयंकर गर्नुभो के , होइन आफ्नो भनाइ अनि बिचार किन राखेको भन्या के ? अनि फेरि तपाईंले कसैको चित्त नदुखाउन माफी मागेर अति गर्नुभो। यो त पराकाष्ठा नै भैगोनी।
गल्ती मान्छेबाट पो हुन्छ त, माफी मान्छेलाई पो दिइन्छ त। अनि थाहा पाइपाइ यत्रो अपराध गरिदिने? हामीलाई तेस्तो अनुमती छ र? यहाँ कुनै दीपा, पूजा , बर्षालाई गल्ती गर्ने छुट छैन है। भन्देको छु नी। मान्छे बन्ने कोशिस नगर्नु।
ल आमा तपाईंले यो पनि हेरिहाल्न्नु हुन्छ, त्यसैले ढुक्क हुनु है। मैले तेस्तो केही लेखेको छैन। हाम्रो समाजकै समर्थनमा लेखेकी छु। मैले मरनासन्न हुने गरि गाली खान्न होला। मेरो चरीत्र जोगिन्छ होला।
सवा ४ किलोको आँप फलाए यी जोडीले, राखे गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड
मेलम्चीको पाइपलाइन बिछ्याइएको सडकमा पानीका ट्यांकर भासिए
होन्डाको नयाँ ‘सिबी ३५० आरएस’ बाइक नेपाली बजारमा, कति पर्ला मूल्य?